Story B - ZimbOriginal
October 15, 2021 March 30, 2021 by ZimbOriginal
Kare kare, kwaiva neumwe musha waiva nemumwe murume ainzi Tigere. Tigere aiva nevakadzi vakawanda. Mumwe wevakadzi ava ainzi Sekai. Sekai akanga asina mufaro nokuda kwekushaya mbereko. Pose paaiona vana vevamwe vachitamba airwadziwa zvikuru. Akava nhohwe nokuti hapana aida kufambidzana naye. Vamwe vakadzi vaimuseka nokumushora. Zvese izvi zvaishungurudza Tigere. Vakanga vafamba mun’anga dzakasiyana-siyana asi hapana kana imwechete yakakwanisa kuvabatsira.
Sezvo Sekai aiziva nhamo yekushaya shamwari, rimwe zuva akashanyira imwe chembere yaigara yoga. Chembere yakafara ikatenda zvikuru. Sekai akaibatsira kuchera mvura nekutsvaga huni.
Vakazoti votandara, Sekai ndokutanga kutaura pamusoro pedambudziko rake. ‘Ndinoshuwira kuva nemwana sevamwe vakadzi,’ akadaro Sekai achiratidza kutambudzika zvikuru. Akarondedzera zvese zvavakanga vamboedza naTigere. Chembere yainge yakanyarara ichiteerera, ndokuzoti kwaari, ‘Iwe waratidza rudo kwandiri, saka neniwo ndichakuitirawo zvakanaka.’
Chembere yakanotora ndove ndokuumba mwana wayakabva yaisa muchibereko chaSekai. ‘Asi teeresesa zvandinoreva’ yakadaro chembere, ‘kana mwana uyu achizenge akura, angaite zvimwe zvose asi haafanire kuzofa akapinda mudanga remombe. Akadaro anosanduka kuita ndove.’ Sekai akapemberera akatenda zvikuru. Akavimbisa kuti mwana wake haaizofa akapinda mudanga.
Sekai akadzokera kumba akaudza murume wake zvakanga zvaitika. Akabva azobata pamuviri, ndokuzosununguka mwana musikana mushure memwedzi mipfumbamwe. Sekai naTigere vakava nomufaro mukuru vakatumidza mwanasikana wavo zita rekuti Ruva.
Ruva akava mwana akanaka aiteerera amai vake. Akakura achiziva mutaro wakanga wapihwa nechembere iya, kuti aisafanira kupinda mudanga.
Akazoti ava mhandara ndokusangana akadanana nemukomana ainzi Muendesi. Izvi zvakafadza Sekai, asi nerimwe divi zvaimutambudza. Hakusi kuti akanga asingade kuti mwana wake aroorwe, asi kuti aimutyira. Ruva aizokwanisa here kuchengetedza mutaro wakapihwa?
Nguva yekuroorwa kwaRuva yakasvika vanhu vakapemberera. Mhemberero dzapera, Ruva akaonekana nevabereki vake achibva aenda nemurume wake.
Zvakabva zvazoitikawo kuti AMuchaneta vakanzwa guhwa rekuti Ruva haaifanira kupinda mudanga. Nokuziva kuti Ruva aiteerera zvose zvavaimutuma, vakabva vafunga zano rekumupfidzisa.
Rimwe zuva Muendesi aenda kumunda, AMuchaneta vakadeedza Ruva. ‘Ruva muroora!’ Ipapo Ruva akamhanya kwaakanga adanwa. ‘Endaka kudanga uunze ndove yekuti tidzure mumba.’ Ruva achinzwa izvi akapatika. Akanga asingade kuramba kuita basa raaitumwa navamwene vake, asi akanga afunga nyaya iya yekuti haaifanira kupinda mudanga. Akabva audza AMuchaneta kuti akanga achiri kubata mamwe mabasa emumba, asi ivo vakasimbirira nyaya yacho kusvika abvuma. Ruva akabva atora tswanda yake ndokunanga kudanga.
Kwakapfuura nguva refu Ruva asina kudzoka, AMuchaneta vakabva vaziva kuti zvavaida zvakanga zvaitika.
Zuva rovira, Muendesi akadzoka kubva kumunda. Akanetseka zvikuru apo akanzwa kuti Ruva akanga ava nenguva asipo. ‘Usanetseka,’ vakadaro AMuchaneta, ‘achadzoka zvake.’ Kunze kwakadzamara kukasviba Ruva asati adzoka. Izvi zvakaita kuti Muendesi anyumwe kuti amai vake vaiva nechekuita nekusadzoka kwemudzimai wake. Akaramba ovabvunza, kusvika vazodura zvavakanga vaita.Achinzwa izvi, Muendesi akamhanyira kudanga remombe uko akanowana tswanda yaRuva. Akadaidzira, ‘Ruva! Ruva!’ asi hapana akamupindura. Akabva atanga kuhwihwidza.
Muendesi haana kuda kupedza nguva. Achihwihwidza kudaro, akamhanya kunotaurira vatezvera naambuya vake zvakanga zvaitika. Achinzwa zvekushaika kwemwana wake Sekai akakwetsura mhere, ukuwo Tigere akangobata musoro. Muendesi akabva azotsanagura zvakanga zvaitika, vatatu ava ndokubva vangonanga kudanga rainge ratsakatikira Ruva.
Vasvika kudanga Sekai akasimudzira mhere yake, achibva atanga kuimba achidaidza Ruva. Ipapo, vakaona musoro waRuva uchinyuka kubva mundove. Vakakanuka nazvo, asi Sekai akabva aziva kuti aitofanira kuramba achiimba. Akaimba, vakabva vazoona mapendekete, chipfuva, dumbu, kusvika muviri wose wooneka. Vachiona Ruva, Muendesi, Sekai naTigere vakafara zvikuru.
Ruva akazoudza Muendesi kuti akanga asisade zvekudzokera kunogara naye, asi kuti akanga oenda nevabereki vake. Ruva navabereki vake vakabva vananga kwavo, Muendesi akasara achichema zvaipisa tsitsi.
1 thought on “Story B”